Sagrada Familia - Taxane cusub oo Netflix ah | Bezzia
Susana godoy | 12/10/2021 14:00 | Wararka
Netflix waxay sii wadaa inay la yaabto mararka qaarkood. Sababtoo ah waa run in mar kasta oo badiyaa ay soo bandhigto taxane soo jeedin ah sida nuxur, laakiin kiiskan waxay siisay layaab weyn markii lagu dhawaaqayo Sagrada Familia. Mid ka mid ah taxanaha Isbaanishka oo leh kaalin weyn oo ku saabsan wax yar oo ilaa hadda la yaqaan, laakiin taas oo hubaal siin doonta wax badan oo laga hadlo.
Tan iyo hadda waxay sameyneysaa oo kaliya dhowr faahfaahin ayaa la yaqaan. Qaarkood waxay ku maraan kaliya shabakadaha bulshada qaarkood iyo qaar ka mid ah madaxda fikirka. Laakiin waxay mudan tahay xusid sababta oo ah markaan tago shaashadda yar waxay noqon doontaa kacaan, dhab ahaantii. Soo ogow wax walba oo iyada ku saabsan!
1 Netflix waa yaab
2 Waa kuwee jilayaasha Sagrada Familia?
3 Fikrad uu qoray Manolo Caro
Netflix waa yaab
Waa run in Netflix ay u timaaddo inay na yaabiso mararka qaarkood maxaa yeelay wuxuu leeyahay nuxur aad u ballaaran. Inta u dhaxaysa taxanaha iyo aflaanta, mararka qaarkood xitaa waannu ku xad -gudubnaa sababtoo ah ma naqaanno midka aan dooranno. Sidoo kale waa run in mararka qaarkood aan sugno horudhacyada maxaa yeelay waxay hore ugu dhawaaqeen madal, si aan dhammaanteen u samayn karno nooc ajende ah. Laakiin kiiskan sidaas ma ahayn oo sidii haddii ay la yaab ku noqotay dhalashada, warku wuxuu imanayaa in taxane cusub oo Isbaanish ah uu yahay mashruuca madal. Laakiin intaas kaliya ma aha, laakiin sidoo kale waxay leedahay wajiyo aad caan u ah goobta qaranka oo ka yimid guran guulo kale oo badan.
Waa kuwee jilayaasha Sagrada Familia?
Najwa Nimri Waa mid ka mid ah wejiyada ugu caansan ee laga arko goobta qaranka. Wuxuu bilaabay inuu la shaqeeyo Santiago Segura laakiin wuxuu sidoo kale la booday Amenábar, ilaa mid ka mid ah doorarkiisa aadka loo amaanay uu ugu yimid taxanaha 'Vis a Vis'. Dabcan ma iloobi karno xilliyadii uu ku soo biiray 'La casa de papel'. Hadda waxaad la yaabi doontaa Sagrada Familia, waan hubnaa. Alba Flores sawirka meeleeyaha waa Mid kale oo ka mid ah magacyada waaweyn ee sii xoogaysanaya oo layaabna ma leh. Ka sokow inay tahay lamaanaha Najwa, waxay hadda ku soo noqonaysaa inay ka mid noqoto mid ka mid ah kabka weyn ee shaashadda yar. Labadaba 'Vis a Vis' iyo 'La casa de papel' ayaa u horseeday inay ku guuleysato abaalmarino dhowr ah.
Laakiin sidoo kale waa in kabka uu ka kooban yahay Carla Campra oo yar oo aan ku aragnay 'xusuus qorka qarsoon ee dhallinta' iyo 'Muuqaalka kale'. 'Fugitivas' ama 'Ánimas' waa qaar ka mid ah cinwaannada aan ku aragnay Iván Pellicer oo shaqeynaya. Intaa waxaa dheer, mid kale oo ka mid ah asxaabteeda waaweyn waa Macarena Gómez oo aan inta badan u naqaanno doorkeeda Lola oo ku jira 'Kan Yimaada', laakiin sidoo kale waxay leedahay taariikh dheer oo ka dambaysa.
Fikrad uu qoray Manolo Caro
Waxaa weheliya dhammaan wajiyadii la yaqaannay, oo aan yarayn, Manolo Caro ayaa lagu daabacay barahooda bulshada. Sharraxaadda halka ay ka timid fikradda ah in la qabto shaqo sidan oo kale ah. Waxay u muuqataa inaysan ahayn wax cusub, laakiin inay tahay wax aad looga fikiro maxaa yeelay in kabadan laba sano wuxuu lahaa fikradda iyo rabitaanka inuu awoodo inuu bulshada u soo bandhigo waxa maankiisa ku jira. Haa, wuxuu mas'uul ka yahay 'Guriga Ubaxyada', oo ahaa mid kale oo ka mid ah guulaha waaweyn ee lagu xisaabtamo. Sida ay u muuqato, duubistii ayaa durba socota waxayna ka socotaa Madrid. Markaa tan iyo markii warka taxanaha noocan ahi soo baxay, qof walba wuxuu sugayaa war, si uu ugu raaxaysto wax kale, taabashada sheekada ama guud ahaan astaamihiisa. Ma arki doontaa markay soo baxdo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Sagrada Familia: Taxane Cusub oo Isbaanish ah oo Netflix ah